Maraakiib dagaal iyo Diyaarado gaaray Xeebta deegaanka Garacad ee Gobolka Mudug – STAR FM SOMALIA
Maraakiib dagaal iyo Diyaarado gaaray Xeebta deegaanka Garacad ee Gobolka Mudug
Wararka ka imaanaya Gobolka Mudug ee bartamaha Somaliya ayaa sheegaya goor dhaw oo saaka ah in Maraakiib nooca waaweyn ah ay gaareen Deegaanka Garacad ee Gobolkaasi Mudug.
Maraakiibtaan ayaa la sheegayaa in dushooda ay ka kacayaan Diyaarado Helicopter ah, waxaana la aaminsan yahay in Maraakiibta ay leeyihiin ciidamada Badda NATO ee howlgalka u jooga Somaliya.
Qof ku sugan deegaanka Garacad ee Gobolka Mudug, ayaa Warbaahinta u sheegay in saaka ay arkayeen Xeebta oo ay taagan yihiin Maraakiib waaweyn oo ay ka kacayaan Diyaarado, laakiin aysan garan karin ujeedada Maraakiibtaasi.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Ujeedka Maraakiibtaasi ay tahay u gaarsiga dagaalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab oo la sheegay inay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadaan Xeebaha Gobolka Mudug.
Deegaanka Garacad waa meeshii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan Shabaab ay ka dageen, xilligii Shabaabka ay duulaanka ku qaadayeen dhulka Xeebaha ah ee Puntland.
Maamulka Deegaanka Garacad, weli kama aysan hadlin maraakiibtaan iyo diyaaradaha saaka lagu arkay deegaankaasi ee dadka deegaanka cabsida ku beeray.
Maraakiib dagaal oo nooca waaweyn ah oo ay leeyihiin ciidamada NATO ayaa ka howlgala Xeebaha dalka Somaliya, kuwaasi oo u jooga la dagaalanka Burcadbadeeda.
Ciidamada NATO ayaa kolkii hore lagu eedeeyay inaysan waxba ka qaban Shabaabkii faraha badnaa ee Badda ka gudbay, kuwaasi oo gaaray Xeebaha Gobolka Mudug ee dhanka Puntland, inkastoo ciidankii Shabaab ee halkaasi gaaray dagaal lagu soo afjaray.